» सैनामैना प्रिमियर लिगको उपाधि सोरौंली स्टारलाई
सैनामैना प्रिमियर लिगको उपाधि सोरौंली स्टारलाई
२९ चैत्र, सैनामैना । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा संचालित सैनामैना प्रिमियर लिग क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सोरौंली स्टार क्लबले जितेको छ । सैनामैनाको लम्टियामा स्टार स्पोर्टस क्लबले आयोजना गरेको प्रिमियर लिगमा सुनगाभा च्याम्पसलाई ८५ रनले हराउँदै सोरौंली बिजयी भएको हो । उपाधिसंगै सरौंलीले नगद ५१ हजार सहित ट्रपि र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । उपविजेता बनेको सुनगाभाले नगद रु २१ हजारमा चित्त बुझाएको छ ।
टस जितेको सुनगाभाले ब्याटिङ्गको निम्तो दिएपछि सरांलीले निर्धारित २० ओभर खेल्दै ६ विकेटको क्षतीमा १५८ रनको योगफल तयार पार्‍यो ।
जीतका लागि सोरौंली स्टारका बसन्त खड्काले ५३ , विश्वास खड्काले ३३ , कप्तान शरोज पौडेलले २१ रनको योगदान दिए ।
१५९ रनको लक्ष सहित ब्याटिङ्ग थालेको सुनगाभा १५.४ ओभरमा पुरै विकेट गुमाउँदै ७३ रनमा समेटियो । सोरौंलीका सुमन थापाले ३. ४ ओभरमा ५ विकेट लिएका थिए ।
सुनगाभाका सित्तलले १५ र केशवले १२ रनको योगदान दिए । अन्य ब्याट्स म्यानले दोहोर अंक बनाउँन सकेनन । सुनगाभाका बलर रोशन खप्तडी र सुमन पन्थीले २ विकेट लिए ।
खेलको म्यान अफ द म्याच सुमन थापा , गेम चेन्जर र मष्ट सिक्सको अवार्ड बसन्त खड्का , प्रतियोतिगाकै उत्कृष्ट ब्याट्स म्यान मनिष खत्री , उत्कृष्ट रञ्जित क्षेत्री , म्यान अफ द सिरिज सरोज पौडेल , उत्कृष्ट फिल्डिर सिजल सुनार , अनुशासित टिममा सैनामैना नाईडराईडस, उदयमान खेलाडीमा गोपान शर्मा घोषित भएको प्रतियोगिताका सिईयो कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सैनामैना नगरपालिका मेयर चित्र बहादुर कार्की , वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष कृष्ण बेलबासे , क्लबका अध्यक्ष खेमराज पोखरेल लगायतले पुरस्कार वितरण गरेका थिए ।